War Deg Deg Ah: 2bo Weerar Qasaaro kala duwan dhaliyay oo goordhaw ka kala dhacay Magaalada Muqdisho!! | kowtharmedia.com
Home WARAR War Deg Deg Ah: 2bo Weerar Qasaaro kala duwan dhaliyay oo goordhaw ka kala dhacay Magaalada Muqdisho!!
War Deg Deg Ah: 2bo Weerar Qasaaro kala duwan dhaliyay oo goordhaw ka kala dhacay Magaalada Muqdisho!!
Feb 18, 2017WARAR
Waxaa goordhaw kooxo hubeesan oo gaari watay weerar ku qaadeen gaari uu la socday sargaal sare oo katirsanaa Ciidanka Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya xili uu marayay agagaarka Isgooska Ceel gaabta ee magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa ku waramay in Kooxo hubeesan ay rasaas ku fureen gaari uu la socday Gen Xasan Maxamed Cali (Xasan Dheere) oo katirsan Saraakiisha Hay’ada Nabad Sugida Qaranka marna soo noqday Taliye kuxigeenkii Nabad Sugida Qaranka xiligii uu Axmed Fiqi taliyaha ahaa.
Weerarkan ayaa la sheegay in uu dhaawac kasoo gaaray Gen Xasan Dheere, waxaa sidoo kale weerarkan ku dhintay sida aan wararka ku heleyno hal askari oo kamid ahaa ilaalada Generaalka la weeraray halka darawalkana uu ku dhaawacmay.
Kooxihii gaariga wateen ee weerarka ka dambeeyay ayaa goobta si deg deg ah uga baxsaday, waxaana halkaasi soo gaaray daqiiqado kadib ciidamo katirsan Nabad Sugida qaranka iyo booliiska kuwaa oo goobta ka qaaday dhaawaca Generaalka iyo askarta geeriyootay.
Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo markii la doortay Madaxweyne Farmaajo, waxaana mudooyinka Muqdisho ka yaraaday weerarada lagu fuliyo gaadiidka ay wataan dableyda hubeesan.
weeraka labaad faahfaahin) Maxamed Cumar Xagafey oo goordhaw lagu dilay Weerar ka dhacay Muqdisho
Kooxo hubeesan oon heebtooda la garan ayaa goordhaw weerar qorsheesan waxa ay ku dileen Afhayeenkii hore maamulka Ximin iyo Xeeb Maxamed Cumar Xagafey sidoo kale hada kamid ahaa maamulka Tv-ga Kalsan.
Weerarkan ayaa ka dhacay agagaarka Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho , waxaana la sheegay in kooxo hubeesan oo gaari watay ay rasaas ku fureen gaari la socday Afhayeenkii hore maamulka Ximin iyo Xeeb.
Goob joogayaal ayaa ku waramay in dabley saarneed gaari nuuca loo yaqaan Prada ay rasaas xoogan ku fureen gaari yar uu watay Maxamed Cumar Xagafey, waxaana dilka kadib halkaasi ka baxsaday gaarigii weerarka fuliyay.
Waa weerarkii labaad oo saacdao gudahood ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana warar soo baxaya sheegaya in labada weerar ay maanta ka dhacay magaalada Muqdisho lagu fuliyay hal gaari ay la socdeen dabley hubeesan.
Previous PostMadaxweyne Muxamed C/ Farmaajo oo safarkii u horeeyay dalka uga ambabaxaya: Dalkee ayuu tagi doonaa? Next PostGabay Cusub Xarigii Coldoon Laga Sameeyey iyo Tageeradii farmaajo!!